YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, April 25
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများရဲ့ သင်္ကြန် သံချပ် ဖျော်ဖြေမှု
ဧပြီလ (၁၆) ရက် (သင်္ကြန်အတက်နေ့) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများရဲ့ သင်္ကြန် သံချပ် ဖျော်ဖြေမှု
Published on 24 Apr 2012 by MyanmarCelebrity
Here is the video of 88 Generation Students' Thingyan performances which was held on April 16, 2012 in front of Daw Aung San Suu Kyi's residence. Visit: http://www.myanmarcelebrity.com/ For More Myanmar Celebrities' News, Photos, Videos and Gossips.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/25/20120အကြံပြုခြင်း
by Maung Maung Wann on Wednesday, April 25, 2012 at 7:43pm ·
မီဒီယာမှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုခြင်းစာသားပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အင်တာဗျူးတွေကို နားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါ…ပညာယူစရာ၊ဆင်ခြင်နိုင်စရာ၊မှတ်သားစရာတွေ မကြားရပဲ..အာဏာကိုဘယ်လောက်ငန်းငန်းတက်နေသလဲ ဆိုတာလူသိအောင် ကိုယ့်အထုတ်ကို ဖြည်လိုက်တာပဲ အဖတ်တင်သွားတယ်…။ ဦးအောင်သောင်း တို့ ဦးဋ္ဌေးဦး တို့ အင်တာဗျူးတွေ နားထောင်ကြည့်ပါ…တိုင်းပြည်ရဲ့ပြသနာကို..အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလည်းဆိုတဲ့..အရိပ်အရောင် တခုမှ မတွေ့ရဘူး….ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က နေရာအများစု နိုင်သွားတဲ့ အပေါ် ကလဲ့စားချေလိုတဲ့ မထိတထိမျက်နှာပေးတွေနဲ့…..ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းစာသားပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးကိစ္စမှာ..သူတို့က အထက်စီးကရှိနေလေတဲ့ လေသံတွေနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတော့..အတော်စက်ဆုတ်မိတယ်ဗျာ။ မိမိ အတ္တကလွဲလို့..တိုင်းပြည်အရေးအတွက် အမျှော်အမြင်မရှိသူများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
အမှန်တကယ်က တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ဦးမော့စေချင်တဲ့ စေတနာကောင်းသာရှိမယ်ဆိုရင်…တိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ဘို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ဘို့ဆိုတာ…မိမိနိုင်ငံတံခါးကိုပိတ်ပြီး…ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးလုပ်ဆောင်ဘို့ဆိုတာ… ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်မဟုတ်တော့ပါ….။နိုင်ငံတကာအကူညီအများကြီးလိုပါတယ်…ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေ လိုက်စုံစမ်းကြည့်ပါ….သူတို့သားသမီးတွေဆွေမျိုးတွေအကုန် နိုင်ငံတကာလွှတ်…သူတို့ကိုယ်တိုင်က…၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်..စီးထားတဲ့ဘိနပ်…ကအစ နိုင်ငံခြားဖြစ်မလွတ် ပါးစပ်ဖျားစကားက လွဲလို့ ဘယ်သူမှ လက်တွေ့ကျင့်ကြံတာမရှိ…၊ ဒီတော့…သေချာအောင်ထပ်ပြောချင်တယ် နိုင်ငံတကာအကူညီလိုတယ်….တရုတ်လောက် ထိုင်းလောက်နဲ့ မြန်မာပြည်ဦးမမော့ဘူး စိတ်ချ……အထူးသဖြင့် အနောက်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု့အများအပြားလိုတယ်……။ အနောက်အုပ်စုက စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူတွေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကို ၀င်ရောက်လာဘို့လိုတယ်…..။ဒါမှ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဦးမော့မယ်….။ သူတို့ ဘယ်လိုရောက်လာနိုင်မလည်း…………….။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းပြေလည်အောင်….လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရော ပြည်သူကပါ..ထောက်ခံမှု့အပြည့်အ၀ရထားတဲ့..အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြေလည်ဘို့လိုပါတယ်…..ဒီလို မပြေလည်သမျှ ကာလပတ်လုံး….ဘယ်အနောက်အုပ်စု စီးပွားရေးအုပ်စုကမှ ၀င်ရောက်မလာတဲ့ အပြင်….စီးပွားရေးပိတ်စို့ထားမှု့ပွင့်လင်းလာရေးကိုလည်း..မျှော်လင့်လို့မရပါဘူး……။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဘို့…တရားဥပဒေစိုးမိုးဘို့လိုပါတယ်…လက်နှက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများနဲ့…ချစ်ကြည်ရင်းနှီးပြီး..စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရှိဘို့လိုပါတယ်…..။
ဒီအချက်ကို ပြည်သူတွေကလည်း မျှော်လင့်ကြတယ်…..သူတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ဘို့….ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့…အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ပုံထောက်ခံကြတယ်….ပုံမဲပေးကြတယ်…….မဲအောင်နိုင်တယ်….ပြည်သူတွေပျော်ကြတယ်…..။ ဒီလို အပျော်တွေက မကုန်သေးခင်ပဲ….လွှတ်တော်ထဲဝင်ဘို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးစာသား အခက်အခဲက…လာခုနေလေတော့ ရှေ့ကို ဘယ်လိုခရီးဆက်ကြမလဲ……စဉ်းစားစရာတွေ…ရင်မောစရာတွေဒေါသထွက်စရာတွေအပြည့်နဲ့…..အမျိုးမျိုးသောဝေဖန် ချက်တွေအပြည့်နဲ့။
ဒီနေရာမှာ ပြသနာတခုက…ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရေးစာသား ကိစ္စမှာ NLD လုပ်ရပ်မှန်တယ်ဆိုတာ ကျနော် ထောက်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ….သို့သော် NLD အနေနဲ့ ပြောလို့မရတာတွေ…မပြောသင့်တာတွေ သူတို့မှာရှိတယ်…ဒါကဘာလို့လည်းဆိုတော့…အစိုးရနဲ့နားလည်မှု့တည်ဆောက်နေဆဲကာလ….အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတံခါးကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ဆဲကာလများဆိုတော့….အပြောအဆို..အနေအထိုင် သတိထားရတယ်…အရာရာသတိထားရတယ်…အယင် NLD မဟုတ်ဘူး…..။ လူထုက တခါ..အာဏာအပ်နှင်းထားခံရတဲ့ ( Mandate power ) တရားဝင်ရထားတဲ့ ပါတီ….။နိုင်ငံတကာရော…အစိုးရရော ပြည်သူများကပါ…အချိန်ပြည့်စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ ပါတီ…။ ဒီတော့..သူတို့ရဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်…ပြောဆိုချက်တွေဟာ…အရပ်ဆန်လို့ မရဘူး…ထင်တာတွေ…ခန့်မှန်းတွေနဲ့လျှောက်ပြောလို့မရဘူး….။ဟိုကွေ့ကို ဟိုတက်နဲ့လှော်..ဒီကွေ့ကို..ဒီတက်နဲ့လှော်လုပ်လို့မရဘူး……။ ကတိတွေကို လွယ်လွယ်ပေးလို့မရဘူး….။ ဒီအချက်တွေကိုတည်မှီပြီး….အခွင့်သာခိုက် အလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်ချင်သူများကလည်း…..လက်လှမ်းမှီရာ…ဒသန အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကြပေါ့။
သို့သော် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့…အစိုးရဘက်က ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးကို လိုလားသူ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လို…..လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းလို လူမျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာလေတော့…..နည်းနည်းတော့…..အနာဂါတ် ရောင်ခြည်တန်းလေးမြင်နေရပြီလားလို့တွေးမယ်ဆိုတွေးနိုင်ပါတယ် ( ဒါပေမဲ့ မသေချာသေး )။….ဒီနေရာမှာ ကျနော် ရင်ထဲ ကလိ ကလိဖြစ်နေတာရှိတယ်…..ဒါက….ဦးဋ္ဌေးဦး နဲ့ ဦးအောင်သောင်း အင်တာဗျူးကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့အခါ…ဘာသွားတွေ့ရသလည်းဆိုတော့…..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်တွေအပေါ် သိပ်အစာကြေချင်ပုံမရဘူး….ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း…အထက်လူမို့သာ…သီးခံထားရတယ်..သိပ်ကျေနပ်ချင်ပုံမရဘူး…. .ဦးဋ္ဌေးဦး ပြောတဲ့စကားတွေမှာဆို…သဘောက…ခင်ဗျားတို့ နဲ့ပြေလည်တဲ့ သမ္မတက..သူ့ပါဝါ ရှိသလောက် သူလုပ်ပေးပြီးသွားပြီ…..အခု ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေး စာသားပြောင်းလည်းပေးဘို့ ကိစ္စက သမ္မတ တယောက်ထဲ လုပ်လို့မရဘူး…..ကျုပ်တို့ လွှတ်တော်က…လုပ်ပေးမှရမှာ….ဒီအလုပ် ကျုပ်တို့ မလုပ်နိုင်ဘူး…လုပ်မပေးနိုင်ဘူး…(ဒီအဓိပ္ပါယ်သက်ဝင်နေတယ်)….နောက်တခါ…ဒီစာသားပြသနာဆိုတာ… .ဘာမှ အရေးမကြီးတဲ့ပုံစံ…( NLD ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ အရေးကြီးတယ် သဘောထားထား ) ပြင်ရမယ်ဆိုရင်တောင်…လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်…မဲခွဲ…၇၅ % စသဖြင့်ပေါ့…..လုပ်ရမှာ…အရေးမကြီးတဲ့..ကိစ္စမို့ မလိုအပ်………..။ အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာ ( Amandment ) ကို အလိုမရှိ……….။
လူကြီးမင်းတို့ပြောသလို..စဉ်းစားတွေးခေါ်လုပ်ဆောင်နေသလို….ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေးစာသားပြောင်းလည်းပေးဘို့..ကိစ္စမှာ…ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေ မလိုအပ်တဲ့…လွှတ်တော်လည်း ဘာမှ မလိုအပ်ပဲ လုပ်လို့ရတဲ့…သာဓက တွေ…ကမ္ဘာမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်…ဒါကို ကျနော် ထောက်ပြမယ်……။
နိုင်ငံတော်တော်များများက အခြေခံဥပဒေများကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ…..ဘယ်နိုင်ငံမှာ ပြည့်စုံတဲ့ ဟာမရှိဘူးဆိုတာ..၀န်ခံထားကြပါတယ်…သို့သော်လည်း..တတ်နိုင်သလောက်..ပြင်ဆင်စရာမလိုအောင် ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိပါတယ်…။ ဥပဒေတွေထဲမှာ..အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်..။ လုံးလုံလျှားလျှား ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဘို့ လိုအပ်လို့ပြင်ဆင်လိုက်ရတာကို ( Amendment ) လို့ခေါ်ပါတယ်….။ ဒါကတော့..အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါရှိတဲ့…အဓိကအရာ ( Main Article )ကို ပြုပြင်ခြင်း ၊ ပြောင်းလည်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်……။ အဓိက ( Main Article ) မဟုတ်ပဲ…အဲဒီ့ အထဲက..လိုအပ်နေတဲ့ နားလည်မူ့လွဲမှားသွားစေနိုင်တဲ့…အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးထွက်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်အချို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုတော့ ( informal amendment ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိက ( main article ) ကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်….အားလုံးသိနေကြသလို….လွှတ်တော်နှစ်ရပ် မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း မှထောက်ခံ၊ လူထုကလည်း အတည်ပြု စသဖြင့် ( ဦးဋ္ဌေးဦး တို့ ဦးအောင်သောင်း တို့ ထင်နေသလို ) လိုအပ်သော်လည်း…….Informal amendment ပြင်ဆင်ခြင်းမှာတော့…ဒါတွေ မလိုအပ်ပါဘူး….။
အမေရိကားမှာကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓက ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်….အမေရိကား ပြည်တွင်းစစ်အပြီးမှာ ကျွှန်များကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတဲ့အကြောင်း ကွန်ဂယက် ( မြန်မာပြည်လိုဆို လွှတ်တော် ) ကနေ ဥပဒေ ကျမ်းကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အခါ ကျွှန်အများအပြားဟာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်…သို့သော်ပြသနာက ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့…ကျွှန်အများပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ကျွှန်ပိုင်ရှင်များက….ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ရဲ့ဟာကွက်ကို ထောက်ပြီး….ကျွှန်များက မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီး မျိုးဆက်များကို တော့ လွတ်မြောက်ခွင့်မပြုဘူး….အဲဒီမှာတင်…အရေးပေါ်အနေနဲ့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်တဲ့
မျိုးဆက် (descendants) ဆိုတာ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးခဲ့ရပါတယ် လွှတ်တော် မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး….ဥပဒေပါ စကားလုံးများဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလည်းဆိုတာ…မှတ်သားစရာပါ….( ဥပမာဆိုပါတော့..အဲဒီနေရာမှာ…Descendants အစား Sons and daughters ဆိုတာ ဖြည့်တင်းလိုက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလည်း….မြေးတွေ မြစ်တွေ တီတွေ တွတ်တွေ ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့…..)အလားတူ လွှတ်တော် မလိုပဲ…ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်ကို ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင်ငံမှာလည်းကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။အခြား ကျနော် လေ့လာ မသိရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံများလည်း ရှိဦးမှာပါ…..။
ကျမ်းကျိန်စာသားပြောင်းလည်းရေးကိစ္စဟာ တကယ်တော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( Main Article ) ကိုပြောင်းလည်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူး…အစိတ်အပိုင်း ( portion ) ကိုသာပြောင်းလည်းခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် လွှတ်တော်မှ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ပေးဘို့ မလိုအပ်ပါ….တစုံလုံးကိုပြောင်းလည်းခြင်း ( Amendment ) လုပ်ရန်မလိုပါ။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်နေတဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရေးစာသား အပြောင်းအလည်း ကိစ္စမှာ ပထမအဆင့် အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံး ( အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ် )ကနေပယ်ချလိုက်ပါတယ်….သို့သော် ပြသနာမရှိ…သမ္မတ ရဲ့အခွင့်အာဏာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်…တကယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နားလည်မှု့တစုံတရာရှိမယ်…..သမ္မတဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂါတ်အတွက် အမျှော်အမြင်ရှိသူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်..စိုးရိမ်စရာမလိုလောက်ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ပြေလည်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီကိစ္စတွေ ကိုကျော်လွန်အောင်မြင်ပြီးလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ..လွှတ်တော်အတွင်း လျှောလျှောရှုရှု ၀င်ရောက်နိုင်ပြီး……မိမိတို့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မည် ဆိုရင်ဖြင့်….တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးထက် မိမိ အတ္တ မာနများကို…ရှေ့တန်းတင်သော..ဦးအောင်သောင်း ၊ ဦးဋ္ဌေးဦးလို လူများအပါဝင်…ကြံ့ဖွတ် တယောက်တလေမှ လွှတ်တော်နား မကပ်နိုင်အောင် ၂၀၁၅ မှာ ကြိုးစားကြပါစို့။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/25/20122အကြံပြုခြင်း
လမ်းမပေါ်မှာ ငွေသုံးရာ ချေးဖို့ စေခိုင်းခံရတဲ့ ကလေးငယ်
Published on 25 Apr 2012 by BurmaVJMedia
ဧပြီလ ၂၃ ၇က်နေ့ နေ့ လည်ပိုင်းခန့် တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြေနီကုန်း ဓမ္မာရုံလမ်းအနီးမှာ မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာအများအပြားနဲ့ အသက် ၁၂ အရွယ်ရှိ မဆုပိုပိုဟိန်းဟာ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေဆီက ငွေသုံးရာ ကို လိုက်လံ ချေးငှားနေသည့်အတွက်လူတွေကသူမကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့ အခါမှာ သူမ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ အိမ်ရှင် အဒေါ်က ငွေသုံးရာကို ချေးငှားဖို့ခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်း မဆုပိုပိုဟိန်းက Burma VJ Media ကိုပြောပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/25/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ရွှေည၀ါဆရာတော် သိက္ခာထပ်အလှူတော်မင်္ဂလာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် တက်ရောက်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ သမဂ္ဂကျောင်းသား တွေစုပေါင်းပြီး ရွေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟကို ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်က သာဓုကျောင်းတိုက်မှာ သိက္ခာထပ် အလှူတော် မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ရာမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလှူတော် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားမှာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုအေးသန်း ၊ စန်းချောင်း ကိုကိုကြီး ၊ ကိုဇော်ဇော်မင်း ၊ ကိုညဏ်လင်း တို့နဲ့အတူ သမဂ္ဂ ကျောင်းသားများမှ ဒုလ္လဘအပါး ၃၀ နဲ့ ကိုရင် ၄ ပါးတို့ကလည်း သာသနာ့ဘောင်ထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မောင်ဝံသ မပြောတဲ့စကား DVB က ကြေညာသွားပါတယ်
by Maung Wuntha on Wednesday, April 25, 2012 at 12:31pm ·
ဒီချုပ်အမတ်များ အနေနဲ့ ကတိသစ္စာပြုရတဲ့ စာသားကို ပြင်မနေဘဲ လွှတ်တော်ထဲဝင်ကြဖို့ စာရေးဆရာမောင်ဝံသက ပြောကြားတယ်လို့ ၂၅ ဧပြီ DVB ရုပ်သံသတင်းမှာ သတင်းကြေညာသူ ကိုသန်းဝင်းထွဋ်က ကြေညာသွားပါတယ်။ မောင်ဝံသက ဘယ်သတင်းထောက်ကို ဘယ်နေ့က ဘယ်နေရာမှာ ပြောတယ်ဆိုတာလဲ လုံးဝမပါဘဲ ဗလာချီကြေညာသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် DVB ကိုရော တစ်ခြားဘယ်သတင်းဌာနကိုမှ အဲသလို လုံးဝမပြောခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်ခုလို ဗလာချီ သတင်းကြေညာသွားတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် နားမလည်ပါ။
တကယ်က ကျွန်တော့် face book မှာပဲ ၂၄ ဧပြီညက ရေးတင်လိုက်တာပါ။ ထောက်ခံသူ မထောက်ခံသူ ထင်မြင်ချက်ရေးသူတွေ အတော်များပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ထဲမှာ DVB လိုရာဆွဲ ပြောသွားသလို ဒီချုပ်တွေ လွှတ်တော်ထဲ ဒီအတိုင်းဝင်သွားဖို့ဆိုတာမျိုး လုံးဝမပါပါ။ ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းသမားချင်း စာနာထောက်ထားတယ်ဆိုရင် DVB အနေနဲ့ ကျွန်တော့်အာဘော်အမှန်ကို ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ် ပြန်လည် လွှင့်ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ (မောင်ဝံသ)
ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ စာသားတွေ Face book မှာ ရှိနေတုန်းပါ။ လိမ်လို့မရပါဘူး။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဘက်စလုံးက တိုင်းပြည်အကျိုးကို ဦးထိပ်ထားပြီး ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။
(၁) ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတာကို လေးစားလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်နဲ့
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ ဒီစကားရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကန့်ကွက်မည့်သူ မရှိတန်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ဒီစကားရပ် ပြင်ဆင်ပေးရေးကို အစိုးရက လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သို့သော် အခြေခံဥပဒေမှာ ကတိသစ္စာပြု စာသားကို ပြင်လိုတယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကပဲ သူတို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့အညီ ဆက်လုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀%က အဆိုပြု၊ ၇၅%ကထောက်ခံ၊ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြု။ (ဒီချုပ်မ၀င်လာခင် ပြင်ပေးပြီး ကြိုဆိုတဲ့နည်း။)
(၃) ဒီချုပ်တွေ မ၀င်လာခင် အဲသလို ပြင်ဆင်ပေးပြီး ကြိုဆိုလိုက်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး စွမ်းဆောင်ချက်တစ်ရပ်လို့တောင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေကို အမှတ်ပေးစရာ ဖြစ်လာမှာပါ။ နောင်အခါမှာလဲ တူတာတွေကို တွဲလုပ်ဖို့ရာ နမူနာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။
(၄) အဲသလို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကဖြစ်စေ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌများကဖြစ်စေ၊ ဒီချုပ်အမတ်များကို ၀င်သာဝင်လာခဲ့ပါ။ အထဲရောက်တဲ့အခါ လေးစားလိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့ စာသားအဖြစ် လွှတ်တော်လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနဲ့အညီ ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်လို့ အာမခံချက်ပေးပြီး ကမ်းလှမ်းလိုက်ရင်ကော၊ ဘယ်လိုနေမလဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ အဲသလို ကတိပေးရင် ဒီချုပ်တွေလည်း မျက်နှာမပျက်ဘဲ ၀င်လာနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ (ပြင်ဆင်ရေးကတိပေးပြီး ၀င်လာစေတဲ့နည်း။)
(၅) ယနေ့တိုင်းပြည်မှာ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ ဒီချုပ်တို့ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ကြဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ နှစ် ၂၀ ကျော် ကြုံခဲ့ကြပြီပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ တိုင်းပြည်ပဲ နာရတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က Messenger ဂျာနယ်မှာ ``အစိုးရပါတီနဲ့ အင်အယ်လ်ဒီ ဘယ်လို ဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ သွားကြမှာလဲ´´ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော် ဆောင်းပါးရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွဲနှစ်ကောင်ခတ်ရင် ကြားက မြေဇာပင် ပြည်သူတွေပဲ နစ်နာရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကနေ ရေးခဲ့တာပါ။ အခု စာသားပြင်ရေး ပြသနာ မပေါ်ခင် စောစောကတည်းက ၁၃၊ ၄၊ ၂၀၁၂ရက်စွဲနဲ့ အဲဒီရှုထောင့်က စိုးရိမ်ပြီး ရေးခဲ့တာပါ
ဒီလွှတ်တော်က ၂၀၀၅ ထိအောင်ခံပါ့မလား
By ရည်ရွယ်ချက် ဘားမား
မြစ်ကြီးနားမြို့ဗုံးပေါက်ကွဲ အနည်းဆုံး ၃ ဦးဒဏ်ရာရ.
Yangon Press International ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆေးရုံလမ်းထောင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး မိနစ်အတန်ကြာတွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ဆေးနေကြစဉ် ယနေ့နံနက် မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတနာရီကျော်အကြာ မြင်တွေ့ရပုံ
by ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ on Wednesday, April 25, 2012 at 6:42am ·
ခြင်ဖြူတွေပေါက်တဲ့ မန္တလေး ။
နဲနဲ မှ အထိ မခံ
နန်းပြဿဒ်တွေ တည်နေဆဲ မြို့
ယဉ်ကျေးမှုတွေ မြင်နေဆဲ မြို့
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ရဲ့ ရနံ
မင်းနေပြည် အမွေ မြို့
ဂုဏ်ယူ စိတ် ထားခဲ့တဲ့မြို့
မြန်မာတို့ရဲ့ ပြယုဒ် ပေါ့။
လူ ပင်လယ်တွေ လှိုင်းထ
နယ်ချဲ့ကို အံတုပြခဲ့တဲ့ မြို့
ကဲ ပါ့ကွာ မပြောနဲ့
ဗြိတိသျှ ဂျပန် လှန်
၈၈ မှာ လည်း လက်မနှေးခဲ့ပါ
မဟန်ချင်တော့ ပုဒ်မ ၁၄၄
မှားပြန် လေပြီ လားနဲ့
ဒီလိုနဲ့ ရေစုန် မျောချခဲ့ရ..ပေါ့..။
အဲတာ တရုတ် တိုက်တွေ ဖြစ်နေပြီ ။
မြန်မာ့ မန္တလေး ဟာ
မြန်မာ မစစ်တဲ့ သွေးများစွာနဲ့
ကိုယ့် နှမလေး တောင်
တနေ့မှာ ကျွန်ပြုခံရတာထက် စိုးမယ်
ပြန်တိုက်ရအောင်က အမနဲ့ရ နှမနဲ့ရ
ပြန်ချအောင် အကိုနဲ့ရ မောင်နဲ့ရ
သားသမီး သားမက် ချွေးမ ယောက္ခမ
ဒဏ္ဍာရီထဲက မြို့ ကလေးလို့
ဇနပုဒ် တဝိုက်က မေမျိုးမြတ်တို့
ငတ်တဲ့အခါ ရွှေလို ရွှေပေးတော့
မပျယ်ခင် နာရကောင်းမှန်း မသိခဲ့...။
တာကော ကတော် အခေါ်ခံရရေး
အမြည်းစားတဲ့ စနစ် အမူးသမားတွေက
နလန်မထူလို့ ကံတလူ ကလည်းပြန်ခဲ့ပြီ။
မသိကျိုး ကျွံ ဆိုတာကတော့
စိတ်ဓါတ်တွေ လှန်ပစ်မှ ရမယ်..။
ကိုယ့်ထမင်း ပဲ ကိုယ်စားတယ် လို့
တစ်ပြားမှမရ ပဲ အလိုတူ
အိမ်သုံးတွေ ချွေ မစု
ထစ်ခနဲဆို ပလာဇာမှာ ဝယ်ဖြုန်း
တာကော ရင်ကို ထုလိုက်မှာပေါ့လို့
ခေတ်က နဲ့ယိုင်ပြီး စပွန်စာတွေပြိုင်
အရောင် လက်ရင်း တောက်ရင်း
ရမက်ဇောတွေ ချွေမရတော့တဲ့ အခါ
အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက်
စိဌံ တိတတု မရွတ်နိုင်တဲ့
စီနံ ဘိခုနီုတို့ စကားမပီ
မရွံ့ မကြောက် စိတ်ထား
သခင်မှိုင်း စကားလို သခင်စိတ်ထားလို့
ထ ထ ကြွ ကြွ ဝိုင်းရှင်းလိုက်ရင်
ကြွ ကြွ ရွ ရွ မြန်မာ့အလှ
ပြန်ဆင်မြန်းနိုင်မယ် ဆိုတာ ယုံစေချင်တယ်....
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စေချင် ...
အသုံးပြုထားသော ကာတွန်းပညာရှင်များအား ဦးခိုက်ပါ၏ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ...
ရွှေည၀ါဆရာတော် သိက္ခာထပ်အလှူတော်မင်္ဂလာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...